Hawlaha Dakhliga Iyo Deg-Dhagaxbuur - Cakaara News
Hawlaha Dakhliga Iyo Deg-Dhagaxbuur
Dhagaxbuur( cakaaranews )Sabti 9ka April 2016, Sida lawada og soonyahay wadan kasta Horumarkiisa iyo dhaqaalihiisuba waxuu ku tiirsanyahay dakliga u soo xarooda iyo wax soo saarka uu sameeyo wadanku. Sidaas darteed, shantii sano ee u danabaysay ayaa waxaa kor u kacday dakhliga u sooxarooda DDSI kadib markii laxoojiyay ilihii dakhliga, wacyigalintii bulshada, waxoosaarka beerha iyo waliba shaqo abuur loo sameeyay bulsho farabadan oo danyar ah. Degmada Dhagaxbuur oo kamida 68 dii degmo ee hore ayaa waxaa shabakada wararka ee cakaranews uga waramay hawalaha dakhliga ee degmada Maareeyaha Wakaalada Dakhliga Degmada Dhagaxbuur Mudane Cabdulaahi Yaasiin Maxamed.
Hadaba maareeyaha ayaa si qodo dheer uga hadlay qorshayaashii u yiilay wakaalda sagaalkii Bilood ee u danbeeyay. wuxuuna sheegay in guulo wax ku ool ah ay kasooo hooyiyeen islaarkaana ay gaadhsiiyeen inay soo saaraan 87% qorshihii uyiilay.
Sidookale maareeyaha ayaa carabka ku dhuftay in hawlaha dakhliga ee u qorshaysan ay soo saarayaan 100% isagoo tilmaamay in iyana ay u qorshaysantahay in la’abuuro ilo dakhli oo cusub si uu kor ugu kaco dakhligii ay soo xarayso wakaaldu.
Dhinaca kale, wuxuu masuulku sheegay in ay wakaaladu qaadatay qorshe dheeri ah oo ku aadan dhinaca dakhli dhalinta islamarkaana ay ku rajawayn yihiin inay ku guulasan doonaan 100%.
Ugudanabayna wuxuu maareeyuhu u mahadceliyay Maamulka Gobalka Jarar, Maamulka degmada Dhagaxbuur iyo waliba dhamaan bulshada ku dhaqan degmada dhagaxbuur oo sifiican uga qayb qaatay Guulaha ay wakaalada Dakhligu soo hooyisay.